Soo-saareyaasha Nalalka & Shirkadaha Alaabada - Shiinaha Warshad Iftiin Qalliin
LEDB200 LED Wall Mounted Nooca Imtixaanka Caafimaadka Nalalka Xarumaha Caafimaadka Xoolaha
Taxanaha iftiinka Imtixaanka ee loo yaqaan 'LED200 Examination Examination' ayaa loo heli karaa sadex dariiqo oo rakibid ah, iftiinka baaritaanka mobilada, nalka baaritaanka saqafka iyo nalka baaritaanka derbiga.
Nooca Darbiga Nalalka Imtixaanka ee LEDB260 LED
Taxanaha laambada baaritaanka ee 'LED260' ayaa lagu heli karaa sadex dariiqo oo rakibid ah, mobiil, saqafka iyo darbiga dhejinta.
LEDB500 Laambad Howlgal LED ah oo gidaar ku xiran oo wata Shahaadooyinka CE
Taxane laambad hawl 500500 waxaa laga heli karaa saddex siyaabood, saqafka dhajinta, mobile iyo derbiga dhajinta.
LEDB620 Nooca Darbiga Nalalka Qalliinka LED-ka ee Soo-saaraha
Laydhka qalliinka ee loo yaqaan 'LED620' ayaa loo heli karaa saddex siyood, saqafka korkiisa, mobilada iyo derbiga oo la rakibo.
LEDB620 waxaa loola jeedaa darbiga buuraha danab qalliin.
LEDB730 Wall Mounting LED OT Laydh leh Gacmo Wareegsan
Laydhka loo yaqaan 'LED730 OT' ayaa lagu heli karaa seddex siyaabood, saqafka ayaa la rakibay, mobiil iyo derbi ayaa lagu rakibay.
LEDB730 waxaa loola jeedaa nalka OT ee gidaarka lagu rakibay.
LEDB740 Wall Mount LED Tiyaatarka Howlgalka Nalalka oo leh Qiimaha Warshadda
Iftiinka masraxa ee loo yaqaan 'LED740' waxaa lagu heli karaa seddex siyood, saqafka korkiisa, mobiil iyo darbi lagu rakibay.
DB500 Siraaj Qalliinka Halogen ah oo Fuulan oo Focus Manual ah
D500 Halogen laambada qalliinka waxaa lagu heli karaa seddex siyaabood, saqafka korkiisa, mobilada iyo derbiga oo lagu rakibay.
DB500 waxaa loola jeedaa nalka halogen ee qalliinka lagu dhejiyo gidaarka.
Nalalka Imtixaanka Caafimaadka ee Nalalka ah ee loo yaqaan 'LEDL100 LED Mobile Flexible' ee loogu talagalay Haweenka
LEDL110, magaca tusaalahan waxaa loola jeedaa nalka baaritaanka caafimaad ee wareega oo leh gacan jilicsan.
Iftiinkaan dabacsan ee dabku waa aaladda ilayska caawiya ee ay inta badan u adeegsadaan shaqaalaha caafimaadku baaritaanka, ogaanshaha, daaweynta iyo kalkaalinta bukaanka.
LEDL100S LED Gooseneck Siraaj Baadhitaan Caafimaad oo Mobilaad leh Diirad la Qaadi Karo
LEDL100S, magacan tusaalahan waxaa loola jeedaa nalka baaritaanka moobiilka gacanta ee gacanta gacanta gooseneck iyo diiradda.
LEDL110 LED Gooseneck Imtixaanka Caafimaadka ee La qaadan Karo Iftiinka Gawaarida
LEDL110 waxaa loola jeedaa iftiinka imtixaanka la qaadi karo ee laydhka.
Iftiinka la qaadan karo ee la qaadan karo waa aalad ilayska kaabayaasha caawiya ee ay inta badan u isticmaalaan shaqaalaha caafimaadku baaritaanka, ogaanshaha, daaweynta iyo kalkaalinta bukaanka.
LEDL200 LED Mobile Imtixaanka Caafimaadka leh Nidaamka Soo Celinta Batariga Ikhtiyaariga ah
Nalalka Imtixaanka Qalliinka LED-ka ee loo yaqaan 'LEDL260 CE Nooca Imtixaanka La Oggolaaday ee Xarunta Caafimaadka Xoolaha
Nalalka baaritaanka ee 'LED260' ayaa lagu heli karaa saddex dariiqo oo rakibid ah, mobiil, saqaf iyo derbi ku dhejinta.
LEDL260, magaca tusaalahan waxaa loola jeedaa nalka baaritaanka nooca taagan.